ချစ်ရတဲ့သမီးလေးကို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါတွေကူးစက်ခံရမှာစိုးလို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ မိခင်တိုင်းက ကိုယ့်သားသမီး နေထိုင် မကောင်းဖြစ်မှာကို အရမ်း စိုးရိမ်တတ်ကြသူ တွေပါနော်။ ဒီထဲတွင် မကြာခင်က သမီးဦးလေး မွေးဖွားထားတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း လည်း အပါအဝင်ပါပဲနော်။ ပြင်ပတွင် ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နေရ တာတွေကို မြင်တိုင်း သမီးလေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပမါနေတာပါနော်။
ခင်လွှမ်းကိုယ်တိုင် အပြင်လုံးဝ မထွက်ပဲ သမီးလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ပြုစုနေ တာပါနော်။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးဖြစ် တာကြောင့် လုံးဝအပွန်းအပဲ့ မခံနိုင်တဲ့ မိခင်မေတ္တာတရားက အရမ်းကို ကြီးမားလွန်းပါတယ်နော်။
” မေ့သမီးလေး ဘာမှဖြစ်လို့မရဘူးနော် 🥺 . မေမေအရမ်းချစ်တယ် ❤️” ဆိုတဲ့ captin နဲ့ မိသားစုသုံးယောက် ပုံလေးကိုပါ တင်ထားပါတယ်နော်။ သမှးလေးကို ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း အတွက် အားပေးစကားများ ပြောပေးသွားကြပါဦးနော်။
ခဈြရတဲ့သမီးလေးကို ကိုဗဈကပျရောဂါတှကေူးစကျခံရမှာစိုးလို့ စိုးရိမျပူပနျနတေဲ့ မမေခေငျလှမျး
ပရိသတျကွီးရေ မိခငျတိုငျးက ကိုယျ့သားသမီး နထေိုငျ မကောငျးဖွဈမှာကို အရမျး စိုးရိမျတတျကွသူ တှပေါနျော။ ဒီထဲတှငျ မကွာခငျက သမီးဦးလေး မှေးဖှားထားတဲ့ မမေခေငျလှမျး လညျး အပါအဝငျပါပဲနျော။ ပွငျပတှငျ ကိုဗဈရောဂါပိုးတှေ ကူးစကျနရေ တာတှကေို မွငျတိုငျး သမီးလေးအတှကျ စိုးရိမျပူပမါနတောပါနျော။
ခငျလှမျးကိုယျတိုငျ အပွငျလုံးဝ မထှကျပဲ သမီးလေးကို အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ ပွုစုနေ တာပါနျော။ တဈဦးတညျးသော သမီးလေးဖွဈ တာကွောငျ့ လုံးဝအပှနျးအပဲ့ မခံနိုငျတဲ့ မိခငျမတ်ေတာတရားက အရမျးကို ကွီးမားလှနျးပါတယျနျော။
” မသေ့မီးလေး ဘာမှဖွဈလို့မရဘူးနျော 🥺 . မမေအေရမျးခဈြတယျ ❤️” ဆိုတဲ့ captin နဲ့ မိသားစုသုံးယောကျ ပုံလေးကိုပါ တငျထားပါတယျနျော။ သမှးလေးကို ရငျအုပျမကှာ စောငျ့ရှောကျနတေဲ့ မမေခေငျလှမျး အတှကျ အားပေးစကားမြား ပွောပေးသှားကွပါဦးနျော။